Maitiro ekugadzira chat newe pachako paWhatsApp 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Unoshandisa kazhinji WhatsApp kuchinjana mameseji uye mafaera neshamwari, mhuri uye vatinoshanda navo. Tichifunga nezvekushamisa kunoshanda kweichi chikumbiro chakakurumbira, iwe ungade kuziva kana paine sisitimu yekuita zvakafanana newe pachako, semuenzaniso, kukutumira iwe ruzivo, mapikicha, mavhidhiyo, nezvimwe. kuti ugare uine ivo vakachengetwa uye vakagadzirira kushandisa, kwete chete kubva kune yako smartphone asiwo kubva kuPC yako. Kana zvirizvo, saka ndingati wawana iwo chaiwo dzidziso, panguva chaiyo!
Nangu mutungamiri wangu nhasi, kutaura zvazviri, ini ndoda kukutsanangurira maitiro ekugadzira chat newe wega paWhatsApp. Pfungwa iyi, inopesana nezvinogona kufungwa nevakawanda, haina musoro uye inokutendera kuti ubude munzira munzira zhinji. Uyezve, maitiro acho ari nyore uye nekukurumidza.
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda, ini ndinokurudzira kuti iwe utore maminetsi mashoma kubva iwe wega uye wotanga kutarisa pakuverenga zvinotevera. Ndine chokwadi chekuti, pakupedzisira, iwe unozogona kutaura kuti unofara kwazvo uye unogutsikana nezvawakadzidza. Iwe unoti chii, isu tinotengesa?
Maitiro ekugadzira chat newe pachako paWhatsApp: Android
Maitiro ekugadzira chat newe pachako paWhatsApp: iPhone
Maitiro ekugadzira chat newe pachako paWhatsApp: komputa
Tisati tasvika pamwoyo wegwara, ngatitsanangure maitiro ekugadzira chat newe wega paWhatsApp, pane ruzivo rwekutanga nezvazvo rwaunoda kuziva.
Chekutanga pane zvese, gara uchifunga kuti kunyangwe kuita kuvhiya kwakafukidzwa neiyi dzidziso chinhu chinogoneka, zvinosuruvarisa WhatsApp haipe sarudzo dzakasarudzika auto-tumira mameseji, zvirinani kwete panguva yekunyora. Saka kuti ubudirire mubhizinesi rako unofanirwa kushandisa yakapusa asi inoshanda "hunyengeri" hunosanganisira kushandiswa kwemapoka.
Rega nditsanangure: zvaunofanirwa kuita ndizvo gadzira boka mairi kuti uzviise wega uye kana imwe chete yekubatana paunoda (pamwe shamwari inoziva nezvezvinangwa zvako, kuti urege kuwana "kusanzwisisika" mukufamba kwako), uye wobviswa. Mushure mekubvisa vamwe vatori vechikamu, iyo chat chat inoramba ichishanda, asi iwe unenge uri wega mushandisi mairi uye nekudaro iwe unogona kutumira mameseji uye mafaera kwauri.
Kana iwe ukawana nzira yandakangotsanangudza zvakanyanya "zvinonetsa", unogona zvakare kunzvenga kugadzira boka uye kutanga kutaurirana newe uchishandisa a chinongedzo chakakodzera, iyo iwe yaunogona kushandisa kutanga nhaurirano nyowani kunyangwe nevanofambidzana vasina kuchengetwa mubhuku rekero.
Chero zvazvingaitika, ramba uchifunga kuti, zvisinei kuti chii chakagadzirirwa muWhatsApp uye nekugadziriswa kwesosi yakashandiswa, iko kutumira-yega kwemeseji haina kuridza chero ziviso ruzha uye kuti meseji dzakatumirwa dziri verenga zvega (kana iyo sarudzo yereti risiti inogoneswa).
Mushure mekuita kutsanangurwa kunodiwa pamusoro, ini ndingati isu tinogona pakupedzisira kusvika pamoyo wegwara uye nekuona maitiro ekugadzira chat newe paWhatsApp. Ngatitangei nemaitiro ekushandisa mumidziyo. Android. Saka, chekutanga tora yako kifaa, kiinura icho, pinda iyo yekumba skrini uye / kana dhirowa uye uvhure iyo WhatsApp kunyorera nekusarudza iyo icon (uyo anayo green kutaura bubble uye chena foni nhare).
Iye zvino zvaunoona chikuru skrini yekushandisa, kana iwe uchida kushandisa iyo nzira inosanganisira kugadzira boka, enda kuchikamu tauriranai yekushandisa, kusarudza inoenderana tebhu kumusoro, bata bhatani na i matatu matatu akataridzika kumusoro kumusoro uye sarudza sarudzo Boka idzva mune iyo menyu inovhura.
Panguva ino, sarudza vamwe kutaurirana (kunyangwe imwe yakakwana) yaunoda kuisa muboka uye tinya bhatani ne museve pazasi kurudyi, wobva wanyora zita raunoda kupa kuboka riri mumunda Pinda musoro weboka Pamusoro, wedzera chero pikicha nekutepa bhatani ne kamera (unogona kutora iyo pikicha kubva kuApple photo gallery kana iwe unogona kutora imwe izvozvi) uye tora iyo tarisa mucherechedzo pazasi chaipo.
Mushure mekugadzira iro boka, iwe unobva wazviwana iwe uri pamberi peyako chat chat. Naizvozvo, enderera nekubvisa kwevamwe vatori vechikamu: kuti uite izvi, tinya bhatani na i matatu matatu akataridzika iri kumusoro kurudyi, ipapo pamusuwo Ruzivo rweboka yakanamatira kumenyu inoonekwa uye sarudza i Vadzidzi kubva pane inoenderana runyorwa pane inotevera skrini, wobva wasarudza iyo sarudzo yeumwe neumwe wavo Delete [nome contatto] kubva mubhokisi rinovhura. Chekupedzisira, simbisa nekudzvanya pane chinhu OK.
Mushure mekupedza matanho ari pamusoro, iwe unenge uri wega mutori muboka rehurukuro. Unogona kuiwana chero nguva nekusarudza iyo zita kubva pamazita ehurukuro paWhatsApp skrini yakapihwa kumatauro, uyezve unogona kunyora nekugovana mafaera newe, uchienderera mberi nenzira imwecheteyo yaunowanzoita yekubata vamwe vashandisi uye kuvatumira mafaira, kana kushandisa munda kuisa meseji iyo iwe unowana pazasi kwechidzitiro uye mabhatani ekuwedzera zvinongedzo, mifananidzo uye meseji meseji uye shandisa sarudzo dzekugovana dzinopihwa nezvimwe zvinoshandiswa.
Kana iwe uchifarira kunzwisisa maitiro ekugadzira chat newe pachako uchishandisa nzira yekubatanidza, ndapota vhura chinotevera chinongedzo https://wa.me/39XXXXXXXXXX (kutsiva a XXXXXXXXXX nhamba yako yefoni) ne browser iyo yaunowanzoshandisa kufuratira padandemutande kubva pane chako chishandiso (semuenzaniso. Chrome), bata bhatani Enderera uye enda kunotaura pane peji raunoratidzwa iwe uye nekukasira iwe unozoratidzwa iyo WhatsApp chat skrini neyekubatana kwako iyo iwe yaunogona kutanga kunyora uye kugovana mafaera.
Ngatitangei zvino kuenda kuIOS uye tione maitiro ekugadzira chat newe paWhatsApp uchiita kubva iPhone. Kuti utange, tora yako "iPhone ne", isvinure, pinda chidzitiro chekumba uye / kana raibhurari yekushandisa uye uvhure iyo WhatsApp application nekutepa pane yako icon (uyo anayo kutaura kwakasvibira kutaura uye chena anogamuchira runhare).
Kana chidzitiro chikuru chemeseji chikaratidzwa, kana iwe uchida kutaura newe uchishandisa nzira inosanganisira kugadzira boka, tinya chinhu tauriranai iripo pazasi, ipapo muchinyorwa Boka idzva iri kumusoro kumusoro, wobva wasarudza imwe yacho kutaurirana (kunyangwe imwe chete yakwana) yaunoda kuisa muboka uye tora chinhu Pamberi.
Panguva ino, nyora zita raunoda kupa kuboka riri mumunda Chinhu cheboka iripo kumusoro, wedzera chero pikicha nekutepa bhatani ne kamera (unogona kusarudza iyo pikicha kubva kune iyo iOS foto gallery kana iwe unogona kutora imwe izvozvi) uye tinya chinhu Dza iri kurudyi kumusoro.
Kana boka rangoitwa, iwe unobva watangiswa kune inoenderana chat chat uye iwe unogona kuenderera nekubvisa vamwe vatori vechikamu. Kuti uite izvi, bata iyo Zita reboka saiti kumusoro, uye pa zita revatori vechikamu iyo iwe yaunowana nekutsikisa pasi pane iyo nyowani skrini inoonekwa, kusarudza sarudzo kune yega yega Bvisa muboka mune menyu inovhura uye inosimbisa zvinangwa zvako nekubata iwo mavara Bvisa.
Shure kwaizvozvo, iwe chete ndiwe ucharamba uri wega mutori muboka, iro raunokwanisa kuwana chero nguva nekusarudza iyo zita kubva pamazita ehurukuro paWhatsApp skrini yakapihwa kumachats. Unogona kuishandisa kunyora nekugovana mafaera newe, uchienderera mberi nenzira imwecheteyo sezvaunowanzoita kutaurirana nevamwe vaunosangana navo uye kutumira mafaera kwavari, ndiko kuti, kushandisa ndima yekuisa mavara pazasi uye mabhatani ekuwedzera mavhidhiyo ., mapikicha, izwi, nezvimwewo, pamwe nekushandiswa kwesarudzo dzekugovana dzakabatanidzwa mune mamwe maapplication.
Kugadzira chat newe wega paWhatsApp kubva ku iPhone uchishandisa iyi link system, pachinzvimbo, zvese zvaunofanirwa kuita kuvhura iyi link https://wa.me/39XXXXXXXXXX (kutsiva a XXXXXXXXXX nhamba yako yefoni) ne browser iyo yaunowanzoshandisa kufuratira Internet kubva kune yako "iPhone na" (semuenzaniso. safari), bata bhatani Enderera uye enda kunotaura uye mvumo yekuvhurwa kweWhatsApp nekubata chinhu Spoiled mukupindura yambiro inoonekwa pachiratidziri. Gare gare iwe unozoratidzwa iyo WhatsApp chat chat pamwe neako wekubata kuburikidza nawo aunogona "kutaurirana" newe
Iwe unogona zvakare kugadzira kutaura newe pachako paWhatsApp uchiita kubva kombiyuta, uchishandisa mutengi weWindows uye macOS kana the Web version zvimwe chete. Kuti uite izvi, tanga tanga iyo WhatsApp application pakombuta yako kana batanidza kune WhatsApp Web kubva kubhurawuza. Kana usati wagona kupinda sevhisi, tarisa iyo QR kodhi inoratidzwa pakombuta uchishandisa iyoWhatsapp application pane iyo smartphone (sekutsanangura kwandakaita kwauri mune yangu yekudzidzisa pane WhatsApp yePC).
Zvino zvaunoona iyo WhatsApp skrini pakombuta yako, kuti ugadzire iro boka raunogona "kutaura" newe, tinya pane icon neiyo cartoons (paWindows uye WhatsApp Web) kana kwauinazvo pepa nepenzura (pane macOS) iripo kumusoro kuruboshwe, sarudza sarudzo Boka idzva kubva pamenyu inoonekwa uye sarudza iyo kumwe kutaurirana (kunyangwe imwe chete yakwana) yaunoda kuisa muboka, wobva wadzvanya museve chitarisiko chepasi.
Zvino, nyora zita raunoda kupa boka mumunda Chinhu cheboka, ipa iyo pikicha nekudzvanya bhatani Wedzera mufananidzo kuboka (unogona kusarudza mifananidzo kubva pakombuta yako, unogona kutora imwe ipapo, kana kuti unogona kuitsvaga pawebhu) wobva wadzvanya pa tarisa mucherechedzo akaonekwa anotevera.
Mushure mekugadzira iro boka, iwe unobva watangiswa kune yako chat chat. Naizvozvo, enderera kubvisa vamwe vatori vechikamu nekudzvanya pa Zita reboka present kumusoro, nekufambisa mbeva pointer ku username iwe unoda kubvisa izvo zvaunowana nekutsikitsira pasi, nekudzvanya dart iyo inowoneka padhuze neumwe neumwe wavo uye kusarudza sarudzo Bvisa mumenyu inoonekwa. Wobva wapindura yambiro inoonekwa pachiratidziri nekudzvanya bhatani Bvisa.
Kana izvi zvangoitwa, iwe chete ndiwe unosara sewega unotora chikamu cheboka chat, iyo iwe yaunogona kuwana nekusarudza iyo zita mune runyorwa rwekukurukurirana pane chikuru skrini yekombuta yeWhatsApp. Unogona kuishandisa kunyora uye kugovana mafaera zvakazvimiririra, uchienderera mberi nenzira imwecheteyo sezvaunowanzoita kuti ubate vamwe vashandisi uye utumire mafaera kwavari, wobva washandisa ndima yekuisa mavara pazasi nemabhatani kuwedzera mavhidhiyo, meseji yezwi, mifananidzo , nezvimwe.
Kana iwe uchida kushandisa iyo system iyo inokutendera iwe kuti ugadzire kutaura newe pachako kuburikidza neiyi link, enderera seinotevera: vhura iyo link https://wa.me/39XXXXXXXXXX (kutsiva a XXXXXXXXXX nhamba yako yefoni) ne browser iyo iwe yaunowanzo shandisa kutsvaga iyo Internet kubva pakombuta yako (semuenzaniso. Borde muWindows uye safari pane macOS), tinya bhatani Enderera uye enda kunotaura, bvumidza kuvhurwa kweWhatsApp (kana zvichidikanwa) uye iwe unobva wazviwana wega pamberi peiyo WhatsApp chat chat pamwe neako wekubata.